Rag lagu eedeeyey iney wariye dileen oo toogasho lagu xukumay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Maxkamadda Darajada koowaad ee Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun dil ah ku ridday labo nin oo la sheegay iney ka dambeeyeen dilka wariye iyo dad kale oo uu ka mid ahaa askari ka tirsan nabadsugidda Soomaaliya.
Maxkamadda ciidamada ayaa sheegtay in labada nin la xukumay ay dileen wariye Maxamed Maxamuud Timacade oo ka tirsanaan TV-ga Universal iyo Cawil Xasan Maxamuud oo ka mid ahaa Ciidanka nabad sugida.
Afhayeenka maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida C/laahi Muuse Keyse ayaa ku dhawaaqay xukunka isagoo sheegay in maxkamadda dabagal iyo xaqiijin ay ku sameysay kiiskani iyo qiraal ah ay sameeyeen labadaan nin ay u cadaatay dambiyada lagu soo eedeeyay in ay galeen islamarkaana maxkamadu ay ku xukuntay xukun dil.
Ugu dambeyntii guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida C/raxmaan Tuuryare ayaa sheegay in marnaba uusan gacanta cadaalada uusan ka baxsaneynin dadka Shabaabka ah ee dila muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Waa markii labaad ee dil lagu xukumo dad loo heysto dilka wariye, waxaana horay dil lagu fuliyey nin la sheegay inuu Muqdisho ku dilay wariye Xasan Yuusuf Absuge oo ka shaqeynayey Radio Maanta.